Pinot Noit & Gruyere Cheese - Cellar Door Distribution
home / wine knowledge / Pinot Noit & Gruyere Cheese
ဒီနေ့မှာတော့ Wine နဲ့ Cheese ကို ကောင်းကောင်းတွဲဖက်သုံးဆောင်တတ်ဖို့ နည်းလမ်းတွေကို ဝေမျှပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ Pinot Noir ဝိုင်အမျိုးအစားအတွက်အလိုက်ဖက်ဆုံး Cheese အမျိုးအစားကို ပြောပြပေးပါမယ်။ Red Berry သီးတို့ရဲ့ အနံ့၊ အရသာ ကိုရတဲ့ Pinot Noir ဝိုင်အမျိုးအစားအတွက်တော့ medium-firm cheese လို့ခေါ်တဲ့ Gruyere Cheese အမျိုးအစားနဲ့ တွဲဖက် မြည်းစမ်းလို့ လိုက်ဖက်ပါတယ်။
Gruyere Cheese ဟာ အာဟာရဓာတ်များစွာကြွယ်ဝတဲ့ Cheese အမျိုးအစားဖြစ်သလို၊ သူ့ကို Pinot Noir ဝိုင်အမျိုးအစားနဲ့ တွဲဖက်လိုက်မယ်ဆိုရင် တကယ့် ကောင်းမွန်တဲ့ လိုက်ဖက်မှုကို ဝိုင်ချစ်သူတို့က ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ Pinot Noir ဝိုင်အမျိုးအစားအတွက်အလိုက်ဖက်ဆုံး Cheese အမျိုးအစားပါ။ နောက်ရက်တွေမှာ နောက်ထပ် Cheese အမျိုးအစားများနဲ့ ဝိုင်အမျိုးအစားတွေကို ဆက်လက်တင်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ဝိုင်ချစ်သူတို့က စောင့်မျှော်ဖတ်ရှုပေးပါဦး။
Today, Cellar Door Distribution will share you about wines & cheese pairing.
Firstly, we are going to share you the best cheese to match with Pinot Noir wine type. The ever-present red berry fruit ofaPinot Noir is the perfect match for the nutty flavors found inamedium-firm cheese like Gruyere. Both have just the right amount of aroma and complexity to them, without running the risk of one overpowering the other.
This is the most suitable cheese for Pinot Noir wine. We will share more cheeses and wines in the coming days. So please look forward Cellar Door Page.